USA: Afar Soomaali oo lagu helay danbi - BBC Somali - Warar
USA: Afar Soomaali oo lagu helay danbi
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 23 Febraayo, 2013, 10:35 GMT 13:35 SGA
Maxkamad ku taala California ee dalka Maraykanka, ayaa afar nin oo Soomaali ah ku heshay danbi inay lacag u aruurinayeen Al Shababaab.
Nimanka danbiga lagu helay waxaa mka mid ah, Imaamkii masaajid ku yaala San Diego. Nin kale oo ah darawal tagsiile magaalada San Diego ayaa wuxuu u ogolaaday Al Shabaab inay isticmaalaan gurigiisa Muqdisho.
Maxkamadda ayaa dhagaysatay cadaymo sida hogaamiyayaasha Al Shabaab ay uga codsadeen ninka tagsiilaha inuu lacag u soo diro, oo ay tahay waqtigii la taageeri lahaa Jihad.
Afarta nin ayaa la xukumi doonaa bisha May ee soo socota.